जस्तोसुकै भयंकर वा पुरानो ‘दाद’ लाई पुर्णरुपमा निर्मुल पार्ने यो गोप्य घरेलु औषधी
शरीरको हात, पाखुरा, गर्दन, घाँटी वा अन्य भागमा चिलाएर रातै खटिरा आउने वा खटिरा पाकेर दाग बस्ने जस्ता समस्या आयो भने हामी यसलाई दाद भनिन्छ। शरीर चिलाएर रातो खटिरा आउने र निको भए पनि यसको दाग कहिल्यै हटेर नजाने समस्या एक आम समस्या हो ।
चाहिने सामग्रीहरु: नरिवलको तेल, कपुर, कागती
बनाउने र लगाउने विधि: एक सफा कचौरामा दुई चम्चा नरिवलको तेल र कपुरको दुइटा दानालाई धुलो बनाएर मिसाउने। कपुरलाई सजिलै हातले नै धुलो पार्न सकिन्छ । यी दुई सामग्रीलाई राम्ररी मिसाएर मिक्स्चर बनिसकेपछी ।
किन हामी पुराना कुरा विर्सन्छौं ?
देशभर ४५ सय मिर्गौला रोगीलाई निशुल्क डायलाइसिस
शरीरमा हर्मोनको गडबडीः पिसाबमा संक्रमणदेखि क्यान्सरसम्म
सर्वाङ्ग नग्न सुत्दा के हुन्छ ? यी हुन् सात फाइदा
सुगर रोगीका लागि यी सात चिज अमृत सरह, जानी राखौ
क्यान्सर लाग्न नै नदिने तरकारी र फलफुलहरु ( डा. हेमराज कोईराला )